Sale Admin Staff Archives - Glory Assumption Space
1. Sales Admin – Female - (5) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ကျပ် ညှိနှိုင်း /လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Manufacturing Co.,Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Admin – Female - (5) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ကျပ် ညှိနှိုင်း /လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက်(၃၀)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - English intermediate level ပြောနိုင်ရမည်။ - Computer Microsoft Word,Excel ,Internet & Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Sales Admin လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - FMCG ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် 9:00 AM to 6:00PM - ပိတ်ရက် စနေနေ့ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ - Ferry ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09977397705, 09263121101 [caption id="attachment_3639" align="alignnone" width="600"] Young Asian manager working on computer[/caption]
Sale Admin ( Executive Level) –Female(5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 3.Sale Admin ( Executive Level) –Female(5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်(လစာညှိနှိုင်း) /မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်။ -တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -သက်ဆိုင်ရာရာထူး နှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ -အဖွဲ့အစည်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ပြီး သွက်လက်ချက်ချာပြီး အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Electronic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Sales Admin Female(5)Posts/လစာ-၂၅၀,၀၀၀-၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ဗဟန်းမြို့နယ်။ •	တက္ကသိုလ် တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	အသက်(၂၅)နှစ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ရမည်။ •	Computer Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	English စကားကောင်းမွန်စွာပြောနိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၂)နှစ် ရှိရမည်။ •	Electronic ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2494" align="alignnone" width="2053"] Business woman at work[/caption]
Sales Admin Staff – Female (5)Posts / Salary- 250,000 Kyats
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Cosmetic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလို ရှိသည်။တပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Sales Admin Staff – Female (5)Posts / Salary- 250,000 Kyats / Lanmadaw Township -ရုံးပိုင်းတွင် ဖုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရမည်။ -စိတ်ရှည်ကာစကားပြောချိုသာပါးနပ်ပြီး customer service အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ -Customer data များကို ရိုက်ထည့်ရန် ကွန်ပျူတာအနည်းငယ်သုံးတတ်သူဖြစ်ရမည်။ -ရုံးတွင်နေပြီး အရောင်းအော်ဒါများကောက်ခြင်း၊ ဆိုင်ရှင်များနှင့်အမြဲထိတွေ့ပြောဆိုခြင်း၊ အရောင်းဝန်ထမ်းများလိုအပ်သည်များကို ထောက်ပံ့ပေးရမည်။ -သက်ဆိုင်ရာအရောင်းအဖွဲ့ဧ။် အရောင်း target များကို လစဉ်လေ့လာပြီး အထက်အရာရှိသို့တင်ပြရမည်။ Position Requirements - အရောင်းပိုင်းသို့မဟုတ် customer service ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - အသက် ၂၃ နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ပညာအရည်အချင်းအကန့်အသတ်မရှိပါ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Admin -Male/Female (5) Posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင် ။ ကျွန်မတို့ G A S အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီမှ ယခု December လအတွက် အမြန်လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position ( ၅၂ ) မျိုး - Part I ကို အစဉ်လာမပြတ် အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ Your Success Is Our First Priority. Your Bright Future Ahead With GAS Recruitment. 1) Sales Admin- Male/Female (5)Posts/Salary-180,000 Kyats(Above)/Mingalar Taung Nyunt Township. -ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ -Computer ကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ့ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ -ဖယ်ရီရှိသည်။နေ့လယ်စာကျွေးပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_1346" align="alignnone" width="400"] ProEXR File Description
Sales Admin - Female (7) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1. Sales Admin - Female (7) Posts / Salary 150000 Kyats / Mayangone Township Requirements - Any Graduate. - Computer Word,Excel သုံးနိုင်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - စကားပြောပြေပြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်ထက်မကျော်ရ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Admin - M/F (5)Posts
******************** URGENT REQUIREMENT ******************* ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ Sales Admin – M/F (5)Posts/Salary – 180000 Kyats / Mingalar Taung Nyunt Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Computer Basic ရရမည်။ - အသက် ၂၀ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ Emailဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက် ထား နိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com , gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
မင်္ဂလာပါရှင့် ။Chemical Product Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်ရှိသည်။ Sales Admin - M/F (5)Posts/Salary – 150000 Kyats /Kyimyindaing Township Requirements • Graduate with any degree. • Age from 20 above. • Minimum2years’ experience in field. • Pleasant personality, good communication and interpersonal skill. • Ability to work under minimum supervision and be self-motivated, initiative and result oriented. • Able to work over time if required. • Proficient in MS office Software (Word, E-mail) • Fluent in English Responsibilities • Order checking in email. • Check invoice and keep in computer. • Prepare proposal. • Report to Sales team for monthly sales Result. • Phone called to customer. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Admin - Female (5) Posts
- ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
Sales Admin - Female ( 5posts )
ဘွဲ့ရ Advance Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ Advance Excel Computer Test စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Sale Admin Staff Male-5 Post
Sale Admin, Male/ (5 post )/150,000 – 200,000 Kyats >> Thingangyan Township << Age over 20-25 years Above 3years experience in related field Any Graduate Internet & Email Good communicate in English Email - gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 Company Address : No. 29, First Floor, Khaing Shwe Whar Street, 1Ward, Hledan, Kamaryut Township.